Ufuna ukuba beze ku-uhambo Krasnodar? Zoo "Safari" Ngokuqinisekile kuwufanele ukuvakashelwa. Lena ngempela indawo emangalisayo. Isiqiwu sezilwane e Krasnodar waqala ukuphila kwabo esingavamile ngempela. Umqondo indalo yayo kufikile ikhanda umqondisi ngemva kwakhe lokuzalwa wanika zelenokrylogo ongasatholakali ngobuningi. Waba umfundi wokuqala ngalesi sikhungo.
Zoo yakhoselisa e Krasnodar ngo-2006. Wabonakala "Sunny Isiqhingi" CHP wesifunda epaki. Yonke epaki sehlukaniswe isilwane izindawo, oluvumela izivakashi abasha, kuyacaca, kunoma yisiphi isimo sezulu, ngokwesimo ophilayo isilwane esithile.
Isiqiwu sezilwane e Krasnodar iyingqayizivele ngempela. On insimu yalo kuqoqwa izilwane zakwamanye amazwe ezivela emhlabeni wonke, eziningi zazo ohlwini ezisengozini.
Lokhu epaki elimangalisayo ikhona eziyishumi amahektare amaningi endawo, yakhelwe isitayela ihlathi. Ukuze konke lokhu endaweni kwadingeka omningi. On the indawo ungabona izakhiwo zixaka ngendlela ethakazelisayo futhi flowerbeds elimangalisayo. siphile izilwane ujabule futhi uzilungise kuleli paki.
Yini kungaba mnandi kakhulu ukwedlula ukubona izilwane? Lapha, isilwane ngasinye has ebiyelwe lalo. Kudingeka ukunakekela okukhethekile Ilungiselelwe eyisakhamuzi ngamunye. abasebenzi Ipaki uthande ezigcemeni zabo, ukusebenza ngokwethembeka ukuze kuzuze nokuchuma kule ndawo eyisimanga.
Manje kwepaki kuhlanganisa izilwane ezifana imvu, ama-kangaroo, izimpisi, ezimthende, lemurs, izimvu zamanzi, lamaphigaga, amakamela, izindlulamithi, izimvubu kanye gibbon anezintende.
By the way, zinyanga lapha ezinhle kakhulu ekuphileni. Lesi silwane uyakufanelekela kuyelapha kuleli paki.
Kukhona ngisho pinnipeds - isilwane sasolwandle esikwaziyo futhi ukuphila ngaphandle ezweni esinamazinyo azingxavula ezimbili noLucy Darling. Ziqeqeshelwa, ngakho ungabukela ukusebenza nge iqhaza zabo. I umi eceleni echibini kukhona abaculi eyodwa ngaphezulu - ke eliqinisa, ngakolunye uhlangothi zingabantu zepulasitiki izivakashi ukuthi indawo ahlale ngesikhathi ubuke le show.
Ungakwazi Yiqiniso, epaki futhi ubone izilwane ezidla ezinye: ingonyama, emhlophe ihlosi, abamnyama panther futhi bear yaseSiriya.
Eceleni ufuna ukukhuluma mayelana peacock. Ekuqaleni kumila umqondisi epaki wedwa lalikhulela peacock kancane.
Konke kuhamba kahle, kodwa amaphuphu udle amaqanda intuthwane, ngakho kwakumelwe bagcine esizeni isiduli esikhulu sondle izingane. pavlinyata Okokuqala badla amaqanda, futhi ngemva kwezinsuku ezintathu baqala ukudla nokukhothamela izintuthwane. Ngenxa yokushoda amaphuphu ukudla angase afe. Inzuzo ngesikhathi wakwazi ukugcina amachwane manje lezi zinyoni ezinhle ngokumangalisayo khulula ukuzulazula kwepaki.
Uzilungise izilwane yaleli paki unyaka ngamunye futhi ekhuthaza abasebenzi nezivakashi Ngaphezu umndeni. Ngokwesibonelo, ekuqaleni kuka-April kulo nyaka, Ngazalwa lapha ezimthende kwempisi. Lezi zilwane kakhulu kabi basekuthunjweni zohlobo, ngakho ukubukeka isilo ilethe izinkinga, kodwa yebo, nenjabulo.
Isiqiwu sezilwane e Krasnodar: ithikithi amanani kanye namahora okuvula
I zoo ivuliwe kusukela 9 ekuseni kuze 9 pm. Izindleko i ithikithi omdala ruble 450, izingane - ruble 350 (ezineminyaka engu-14). Kungenwa mahhala ezinganeni kuze iminyaka emibili. Ngo epaki, ungakwazi ukusizakala umhlahlandlela. Izindleko - ruble 500.
On safari park endaweni Ungathatha izithombe futhi ividiyo, kodwa ezidinga i extra olungeziwe.
Ukuze amaqembu isinyathelo isaphulelo nice - omdala ohambisa iqembu aphume izingane eziyishumi abavakashela kwepaki mahhala.
Lokhu safari-epaki uzokwazi ukuze uqaphele iphupho umkakhe amthandayo, ebona izilwane zakwamanye amazwe kakhulu emhlabeni. Ngakho-ke, uma ucabanga ukuthi ukuya kule ndawo, bese ukhetha Yebo, ukhetho lokuqala. Believe me, ngeke uzisole! Safari Park futhi abahlala khona babizwa elinde wena!
Ihhotela Golden Beach 4 *, Turkey - izithombe, amanani, kanye nokubuyekeza zezivakashi ezivela eRussia
Ngawo nogologo Uzokhanga kubo bonke!